KUFSIIRKA DHIIG-DARRIDA - MUHIIMADDA DAAWEYNTA IYO NADIIFINTA HABABKA GURIGA - KUFSI
Waa maxay jeermi-dilista?
Kiniiniyada jeermiska ayaa loo baahan yahay ka hor iyo ka dib fadhiga kuleylka, iyo sidoo kale ukumaha ka hor inta aan la saarin.
Ka dib marka lowska cuncunka ku dhex jira qalabka, fluff weli, weli waa qolof, dareeraha kaas oo embriyaha la sameeyay, dhiig.
Kufsi Qaboojiye: Video
Dhammaan tan waa in si fiican loo maydho, sababtoo ah hoos-u-dhaca heerkulku sarreeyo, walxahan qashinka ah waxay dhalinayaan kobcinta sheyga waxyeelada leh ee khatar u noqon kara caafimaadka jiilka cusub ee cusub.
Intaa waxaa dheer, embriyaha hore ayaa lagu qaadi karaa cudur kasta oo loo gudbin doono guurka soo socda iyada oo aan jeermiska qashin-qaadin. Tani waxay si toos ah u saameyn kartaa heerka badbaadada ee qaybta soo socota.
Sidaa daraadeed, nidaamka jeermiska ayaa ah mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee hawlgalka qandhada iyo taranka.
Baro sida loo doorto kuleylaha, iyo sidoo kale inaad la socoto sifooyinka muhiimka ah ee kuleyliyeyaasha sida "Layer", "Cinderella", "Blitz", "Stimulus-1000", "Hibiska Fiican".
Waxaa jira habab badan oo jeermi-dilid ah, kaas oo lagu isticmaalo jeermisyada kala duwan.
Marka la eego nooca antiseptic waxaa loola jeedaa 3 siyaabood:
Waxa kale oo jira nidaaminta habka loo isticmaalo jeermi-dilista:
Nadiifinta waxaa la sameeyaa ka dib markii gudaha qalab si fiican loo dhaqo xal soodhaha iyo qalajiyey. Qashin ka soo kabashada soo-qaboojiyaha waa la gubayaa.
Waa muhiim! Haddii haraaga dabiiciga ah ay joogaan qashin-qubka, jeermi-faafintu waxay noqon doontaa mid aan waxtar lahayn.
Tani waa midka ugu caansan. Ku habboon labadaba warshadaha iyo qalabka guryaha, oo ay ku jiraan kuwa is-diyaarka ah. Chloramine waxaa laga iibsan karaa farmasiga qiimo macquul ah.
Habka loo diyaariyo xal: Kala saar 10 kiniin ee 1 litir oo biyo ah. Daaweyntu waxay dhacdaa iyadoo lagu buufinayo buufin. Waxaa muhiim ah in lagu shubo meelo adag oo la gaari karo iyo goobaha halkaa ka soo hartey qulqulka gaar ahaan sare, iyo sidoo kale in si fiican loo buufiyo baakidhka.
Xalka ayaa ku haray darbiyada qalabka loogu talagalay 3-4 saacadood. Tani waxay ku filnaan doontaa inuu dilo jeermiska. Muddadaas ka dib, gudaha gudaha masaajidka ayaa u baahan doona in lagu nadiifiyo biyo nadiif ah. Dhaqitaanka waxaa lagu sameeyaa maro, meelo adag oo la gaari karo waxaa lagu dhaqaa buraash.
Ka dib markii la qoyan yahay, qalabku waa inuu istaagaa muddo 24 saacadood ah oo furan si uu u qalajiyo gebi ahaanba.
Lammaanaha rasmiga ah
Hab kale oo caan ah oo loo yaqaan macaamiisha hatchery. 50 ml oo ah 40% formaldehyde waxaa lagu qasan yahay 35 mg oo kaneeco ah. Xalka wuxuu ku shubaa weel qoorta oo ballaaran oo lagu rido qalab kulul.
Heerkulka kuleylaha ayaa la dhigaa 38 ° C, godadka dabaysha ayaa xiran. Ka dib 40 daqiiqo ayaa la furay oo la duubay maalintii. Si urka u dhaqso badan, ammonia ayaa lagu buufiyaa gudaha qalabka.
Waa muhiim! Formaldehyde waa wakiil sun ah, sidaas darteed isticmaalkiisa waa inuu ilaaliyo mareenka neefta, indhaha iyo gacmaha.
Formaldehyde waxaa lagu bedeli karaa qasaaro ama fal-dambiyeed.
Qayb ka mid ah qaababka
Qeybta hoose ee qalabka waxaa la dhigayaa weel dhoobo ah ama la dhalaaley, oo leh xal shidaal ah (37% aqueous formaldehyde solution, 45 ml halkii mitir ee mitir), 30 ml oo biyo ah iyo 25-30 g oo ah kiniinka potassium.
Markabka ayaa lagu rakibay gudaha qalabka. Sida kiiskii hore, godadka dabaysha iyo albaabbada ayaa xiran. Sidaa daraadeed uumiinka jeermisyada ayaa si siman loogu qaybiyey dhamaan qalabka, taageere ayaa loo rogay. Heerkulka waxaa la dhigaa 37-38 ° C.
Ka dib 2 saacadood oo jeermi-dilaacid ah, kiniisada ayaa la furay oo la duubayaa 24 saacadood.
Humboge peroxide hydro
Marka la eego habka kor ku xusan, daaweynta huurada hydrogen peroxide ayaa la samayn karaa. Peroxide waxaa lagu shubaa weel, oo lagu rakibay dabaqa hoose ee kulaylka, heerkulku waa 37-38 ° C, daboolka ayaa loo rogay, albaabka iyo godadka dabaysha ayaa xiran. 2 saacadood ka dib, albaabka waa la furay, qalabku waa hawo.
Ozone waxaa loo bilaabay qolka (300-500mg halkii mitir oo mitir). Samee heerkulka 20-26 ° C, qoyaan - 50-80%. Muddada habka jeermiska - 60 daqiiqo.
Hufnaan iyo isla mar ahaantaana si dhammeystiran oo amaan ah. Muraayada ultraviolet waxaa lagu dhejiyaa naqshad nadiif ah. Nadiifintu waxay qaadataa 40 daqiiqo.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1910-kii Maraykanka ayaa rikoodhkii loo sameeyay inuu cuno ukunta - nin wuxuu cunay 144 ukumo mar. Naagtu waxay ku guulaysatay inay sixirto 65 daqiiqo 6 daqiiqo 40 ilbiriqsi.
Daroogooyinka diyaar u ah
Dukumintiyadu waxay bixiyaan badeecooyin kala duwan oo ku habboon aaladaha jeermi-dhalinta. Waxaa lagu soo bandhigaa qaabka aerosols iyo sprays.
Waxaa ka mid ah caan ah:
Marka jeermiska lagu nadiifiyo, Brovadez-plus ayaa loo isticmaali karaa.
Miisaaniyaddan waa in loo isticmaalo si waafaqsan tilmaamaha lagu rakibay baakadka. Waxaa loo isticmaalaa oo keliya meelaha dusha sare ee kuleylaha kuwaas oo hore loogu nadiifiyey harta. Marka la dalbado waa in la iska ilaaliyo xidhiidhka mashiinka, kululeeyaha, dareeraha.
Ka shaqeynta iyo jeermiska ukumaha ka hor inta aanad ku dhicin masiibada
Inkasta oo qaar ka mid ah beeralayda digaaga ay su'aalayaan baahida loo qabo in jeermiska laga dhigo ka hor intaan la dhigin, weli waa lagama maarmaan in la sameeyo habraacan, sababtoo ah iyada oo aan loo eegin sida nadiifinta qolofta ugu horeysa, fungal iyo microbial flora ayaa had iyo jeer ku jirta.
Sida loo nadiifiyo loona nadiifiyo kuleyliyaha: video
Waa inay si gaar ah u taxadaraan, maadaama ay saameyn ku yeelatey qolofku waxay horseedi kartaa xoqidda daboolka dabiiciga ah iyo burburkii hore.
Ma taqaanaa? Sannadkii 1990, waxaa isku dayey in la isku daro ukunta meel bannaan. Waxay ku guulaysatay - waxay ku guuleysatey in ay keenaan 60 bakeer oo ka soo jeeda 60 ukun. Hadda digaagduur waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin shimbiraha ugu horreeya ee ku dhasha xaalado culus.
Wixii jimicsiga ukunta, sida hibada laftiisa, waxaa jira dhowr siyaabood.
Ku saabsan ku dhaqidda qolofka daaqsinka digaaga ayaa doodaya. Qaarkood waxay aaminsanyihiin in geedi-socodka hawshaas ka dib ay si weyn u dhacdo. Qaar kale waxay ku doodaan in aysan wax saameyn ah ku yeelan tirada tirada buul-yarta ah.
Baro wax badan oo ku saabsan in la dhaqo ukunta ka hor inta aanad ku dhicin maskaxda.
Adiga ayay kugu tahay inaad sameyso ama aadan ku dhicin, laakiin waa inaadan ukumo ku ridin qolofka wasaqeysan ee ku jira maskaxda - oo leh bulaacad, wasakh, dhibco.
Tani waxay horseedi doontaa xaqiiqda ah in hoos-u-dhac ku yimid heerkulka sare iyo qoyaanka ku jira maskaxda, jeermisyada waxyeelada leh ee guurka ayaa bilaabi doona in lagu dhufto.
Haddii qolofku yahay mid aad u wasakh ah, waa in lagu nadiifiyaa buraash ka hor. Haddii aysan suurtagal ahayn in tan la sameeyo, ukunta wasakhda ah waa in la tuuraa.
Daaweynta rasmiga ah
Xayawaanku waxaa lagu nadiifiyaa si la mid ah qaab isku mid ah kiniinjirta, laakiin habab kale iyo feejignaan kala duwan. Hawlaha loo diyaariyo 0.5% xalal farsamo - Fikraddan waxaa lagu gaari karaa iyada oo la sifeynayo walaxda biyaha ee cabiraadda 1 illaa 1. Dareerka ayaa loo kululeynayaa ilaa 27-30 ° C.
Ukumaha waxaa lagu ridayaa shabakad, oo lagu xoorey xal xanaacsi ah ilaa meesha wasakhaysan la nadiifiyo.
Waa muhiim! Xakamaynta qolofka ayaa si adag loo mamnuucay, maadaama ay dhaawici karto lakabka dabiiciga ah waxayna horseedi kartaa burburkii hore ee burburka.
Samee mashiinka maaddada rasmiga ah
Nidaamkani wuxuu u baahan yahay qolka la xiray oo aad ku hagaajin karto heerkulka iyo qoyaanka.
Ukumaha iyo weelka la isku daro ayaa la geliyaa:
30 ml oo ah qaabab (40%);
20 ml oo biyo ah;
20 g Kaarboor daloolka.
Xaddiga qaddarku waa ku filan 1 cu. m
Marka hore waxaa la isku qasan yahay biyo. Potassium ayaa lagu daraa xilliga ugu dambeeya marka weelka hore loo geliyay qolka. Waa ka dib marka lagu daro fal-celin rabshadeed oo dhacda, taas oo ah natiijada ka dhalatay jeermisyada jeermiska dila.
Ka dib marka lagu daro kiimikaad, waa in qolka waa la xidhaa. Neefsashada kuwan qiiqa ku jira qof ayaa halis ugu ah caafimaadka.
Heerkulka qolka waa 30-35 ° S oo qoyaanku waa 75-80%.
Qaliinka wuxuu soconayaa 40 daqiiqo. Kaddib marka qolka la furo, ukunta waa la saaraa oo la duubaa.
U qalmidda ukunta jeermiska iyo habka fudud, habka raqiis ah iyo habka ugu wanaagsan ee loo yaqaan quartz.
U kaxee sida soo socota:
Ukunta waxaa lagu dhejiyaa saxarad.
Meel fog oo ah 80 cm laga bilaabo qashinka saxda ah oo ay ku jiraan ilaha shucaaca-meerkuri.
Nidaamka cagaarshowga waxaa lagu sameeyaa 10 daqiiqo.
Daaweynta hydrogen peroxide
Qaabkan, hel xal 1% ah oo ah hydrogen peroxide, ama 1.5% oo leh qashin xoog leh oo ka mid ah qolofka. Waxaa lagu shubaa weel oo ukumo ku ridaa. Muddada nidaamka - 2-5 daqiiqo. Kadib dhammaadka fayadhowrka, dareeraha ayaa la miiray, ukunta waxaa lagu waraabiyaa xal cusub, laga saaray oo si fiican loo qalajiyey.
Halkii laga heli lahaa hydrogen peroxide, waxaad ku daaweyn kartaa biyo qajaar ah ama xal daciif ah oo ah kaneecada.
Waa muhiim! Kaliya walxaha kulubka ah ee la qallajiyey waa in lagu dhejiyaa naqshadda.
Sidaa darteed, nadiifinta kuleylaha ka hor iyo ka dib kulan kasta oo kulul - Tani waa tallaabo muhiim ah oo muhiim ah. Waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan oo macnaheedu yahay, kadib markaad si taxaddar leh u nadiifiso oo aad u dhaqdid qalabka, maxaa yeelay haddii haraaga dabiiciga ahi gudaha ku jiraan, jeermi-faafintu waxay noqon doontaa mid aan waxtar lahayn.
Sumosiinta iyo waxay u baahan tahay ukunta. Markaad isticmaasho walxo waxyeelo leh sida qaab-dhismeed ama rasmi ah, tallaabooyinka badbaadada shakhsi ahaaneed waa in la fiiriyaa.
Waxaa suurtagal ah in lagu mayrto qubayska iyada oo la adeegsanaayo "looma furo sida waafaqsan tilmaamaha"), dabcan, waa WAXYAALO in la isticmaalo ilaalinta gacanta! Xaqiiqooyinka, mararka qaarkood qalabka wax lagu kobciyo ma ahan inay si fiican u daboolaan sunta, gaar ahaan kuwa asalka ah, ama dadaal weyn oo loo baahan yahay in laga saaro (waa adag tahay in la dhaqo borotiinka ka soo baxa dusha derbiyada :() Digaagga digaaga, dabcan, waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan kiimikooyin khaas ah oo aan ka saari karin waa wax dabiici ah oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay nadiifisaa dufan iyo macdanta macdanta, iyo qaar ka mid ah saabuunaha ayaa sidoo kale leh saameyn xun oo jeermis ah.